SCIC, onye na-arụkọ ọrụ na ọrụ nke ókèala
Ọha na-amabeghị nke ọma na ọha mmadụ, mkpokọta mmasị na-arụkọ ọrụ ọnụ - SCIC - ruru 735 na njedebe nke 2017 ma na-eto site na 20% kwa afọ. Ha na-akpọkọta ndị niile nwere mmasị n'ịza nzaghachi mkpokọta maka okwu achọpụtara na mpaghara, n'ime usoro iwu siri ike.
SCIC bụ ụlọ ọrụ azụmahịa na imekọ ihe ọnụ nke ndị obodo nwere ike ịbanye n'isi obodo n'enweghị ihe ọ bụla ma sonye na ọchịchị na-achịkọta nke ọma: ebe nke ọ bụla doro anya, n'ihi na iwu nke iwu na-achịkwa ya (iwu ụlọ ọrụ, imekọ ihe ọnụ na ndị ọchịchị obodo) na site na nkwekọrịta n'etiti ndị òtù. Mmepe ụlọ ọrụ n'oge na-adịbeghị anya na-ewusi ikike na ọrụ dị n'ime obodo, site na ime obodo ruo na mpaghara, na nlekọta na mmepe nke ọrụ akụ na ụba na ọrụ mmekọrịta mmadụ na mpaghara ha.
Ihe ịma aka ndị a nke ịdị n'otu na mmekọrịta ọha na eze na akụ na ụba na-akwali obodo imepụta usoro omume ọhụrụ, ụdị ọhụrụ eweghachi na nke ọma nke mmekọrịta ọha na eze na nkeonwe. Ndị SCIC na-anabata ọchịchọ a, site n'ikwe ka ndị na-eme ihe nkiri na ndị bi na mpaghara tinye aka na mmepe nke ókèala ha na ndị obodo. Mgbe ndị ọchịchị obodo na-ekere òkè na SCIC, ọ na-arụ ọrụ na-arụsi ọrụ ike n'akụkụ ndị ọzọ na-eme ihe nkiri na mpaghara iji meziwanye àgwà na ịrụ ọrụ nke ime mkpebi ọha na eze, iji nyere aka n'izizi ya na iji mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịkwuo elu nke obodo. .
Ebumnuche nke ọzụzụ a bụ ime ka ị chọpụta ngwá ọrụ ọhụrụ a bụ SCIC: ụkpụrụ nke okike na ọrụ ya, panorama nke SCIC dị adị, ikike mmepe ha. Ị ga-achọpụtakwa ụzọ nke imekọ ihe ọnụ n'etiti ndị ọchịchị obodo na Scic.
GỤỌ "Mkpokọta ikwu n'ụzọ": mmughari ụzọ ịgbanwe ọrụ
SCIC, onye na-arụkọ ọrụ na ọrụ nke ókèala Ọnwa Iri na Abụọ 13, 2021Tranquillus
gara agaPython 3: site na ntọala ruo n'echiche dị elu nke asụsụ
-esonụIguzosi ike n'ezi ihe sayensị na ọrụ nyocha
Akaụntụ ọzụzụ nkeonwe (CPF): mara ikike gị
“Ajụjụ ọnụ ndị ọkachamara” na “Usoro afọ isii” gbasaa ruo na June 6, 30
Jikwaa oge oru ngo
Nna ukwu gị digital aha